China Rail Glass & Railure pabrik sy mpanamboatra | Yongyu
Manamaivana ny loza miaraka amin'ny vera fiarovana
Ny fitaratra azo avy amin'ny Glass Yongyu dia miompana amin'ny endri-javatra fanampiny hiarovana anao amin'ny fandrahonana raha misy hitranga ny tsy fahampian'ny sasany. Nohamafisina avy any anaty ny vokatrao mba hampitomboana ny tahan'izy ireo ary hisakanana azy ireo tsy ho latsaka raha tapaka ny loza. Miaraka amin'ny fitaovana miramirana be dia be, ny fitaratra laminated fiarovana dia sarotra ny manapaka ary mahatanty enta-mavesatra izay tsy mahomby ireo safidy mahazatra.
Ao anatin'ity vokatra ity dia omena safidy marobe ianao. Amin'ny ankapobeny, dia azo alaina tahaka ny fitaratra misy vera sy laminated. Ny teo aloha dia nandalo fomba fandroana manokana sy fampangatsiahana manokana mba hanamafisana ny tanjany, fa ny farany kosa dia milentika miaraka amin'ny interlayer PVB mba hanaovana fampisehoana tsara.
Vera miloko misy vera maloto sy esorina ho an'ny rindrina fisarahana, fefy ary maro hafa
Raha ny vokatra rehetra ataonay dia manome fanoherana fiantraikany fanampiny mifono amin'ny fiarovana ny hazavana UV, dia azo ampiasaina ho an'ny rindrina mitambatra, fanodikodinam-baravarankely, fisehoana varavarankely, mpizara birao, sns. Azonao atao ny mitodika aty aminay amin'ny alàlan'ny SGCC ankatoavina sy ny alàlan'ny afo. Ny fampiharana ilaina dia misy ny loza mety hitranga amin'ity.
Azonao atao ihany koa mividy vera fiarovana laminated mba hampihenana ny tabataba any ivelany. Io dia mety tsara ho an'ny tsy varotra ara-barotra ihany fa ny trano fonenana, mitondra fampiononana amin'ny fivelomanao. Diniho ny vokatra misy ary misafidy ny mety aminao amin'ny Glass Yongyu!
Previous: Facade / Taratra fitaratra vita amin'ny rindrina
Manaraka: LABER® U fitaratra fitaratra
Aretina fitaratra matevina
Mihena ny rindrina fitaratra
Hoso-drindrina vita amin'ny Glass
Ny fefy fitaratra azo alaina
Dupont nahazo alalana SGP Laminated Glass
Tinted & Ceramic Frit & Frosted-ambany-E ...
Famandrihana fitaratra fitetezam-baravarankely / fefy fitobiana ala